iPhone 12: ကောလာဟလများ၊ စတင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအရာအားလုံး - iPhone News | အိုင်ဖုန်းသတင်းများ (စာမျက်နှာ ၂)
Apple iPhone 12 အတွက်အရောင်အသစ်များနှင့်ဖုံးအုပ်ထားသောစီးရီးများပေါ်လာသည်။ ဤကိစ္စတွင်အရောင်သစ်လေးမျိုးရှိသည်
Consusmer Reports မှလူငယ်များက iPhone 12 Pro Max သည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံး iPhone ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်
Samsung နှင့် Apple တို့သည်စမတ်ဖုန်းများလွှမ်းမိုးလာကတည်းကတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်တက်လာသည်။
အက်ပဲလ်ဟာသူ့ရဲ့တရားဝင် YouTube channel မှာကြေငြာချက်အသစ်တစ်ခုထုတ်လွှင့်လိုက်ပြီး iPhone 12 ပြိုလဲမှုကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုပြသလိုက်သည်
iPhone 12 အသစ်၏ခိုင်မာမှုသည်၎င်း၏ရှေ့မျက်နှာပြင်၏အားသာချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့် Big Apple ကြော်ငြာအသစ်၏အာရုံဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်ဟာသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတရုတ်ပြည်ကနေထုတ်ယူနေဆဲဖြစ်ပြီးအခုတော့ iPhone 12 ရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီ
Apple သည် iPhone 12 အတွက် MagSafe ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုနေသည်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သော beta2ဗားရှင်း iOS သည် MagSafe ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပြင်ပအားသွင်းဘက်ထရီအကြောင်းပြောဆိုသည်
အက်ပလီကေးရှင်းများရှိ Genius မှ iPhone 12 mini နှင့် iPhone 12 တို့တွင်ကျိုးပဲ့နေသည့်နောက်ဘက်မှန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်
Apple က iPhone 12 Pro နှင့်ပန်းများဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်အကြံပေးချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Apple 12 သည် iPhone XNUMX Pro နှင့်ပန်းပွင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက်အကြံပေးချက်များကိုထုတ်ဝေသည်။ သင်၏ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးများကိုဖော်ပြရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခု။
iPhone 12 mini ကိုinပြီလမှာရပ်ဆိုင်းထားနိုင်ပါတယ်
JP Morgan မှပြောကြားသည်မှာ Apple သည်ဈေးကွက်တွင်အောင်မြင်မှုအကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့် iPhone 12 mini ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Kuo က iPhone 13 တိုးတက်မှုသည် Ultra Wide Angle ဖြစ်သည်
သူကကြာမြင့်စွာပြောခဲ့သကဲ့သို့, လေ့လာဆန်းစစ် Ming-Chi Kuo က iPhone 13 ၏ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုသည် Ultra Wide Angle ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Apple ရဲ့အဆိုအရ iPhone 12 ဟာများသောအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားတဲ့ iPhone ဖြစ်တယ်
iPhone သုံးစွဲသူများစွာသည် Apple ၏စမတ်ဖုန်းတွင် 5G ကိုအသစ်ပြန်လည်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်
iPhone 12 Pro Max ကိုတရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွင်ရိုက်ကူးခြင်း
အက်ပဲလ်ဟာတရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို“ Nian” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒဏ္myာရီသတ္တဝါအကြောင်းကိုသိချင်တဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အောင်ပွဲခံသည်။
AirPods အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အားသွင်းနိုင်သည့် iPhone Case များကို Apple ကတီထွင်ခဲ့သည်
Apple မှမှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့်တစ်ခုအရ iPhone နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော AirPods အားသွင်းရန်ကိစ္စများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပြသသည်။
လေ့လာချက်အရ iPhone 12 သည် defibrillator နှင့် ၀ င်ရောက်မှုကိုပြသသည်
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုအရ iPhone 12 ရှိ MagSafe ရှုပ်ထွေးသောအနေဖြင့် implants defibrillator အားပိတ်ပစ်စေနိုင်ပုံကိုပြသခဲ့သည်။
iPhone 12 ဟာသူ့အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စက်တွေထက်ထုတ်လုပ်ရတာသိသိသာသာစျေးကြီးတယ်
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုအရ iPhone 12 ကိုလုပ်ခြင်းသည်ထိုအချိန်က iPhone 20 ထက် ၂၀% ပိုကုန်ကျသည်။
Counterpoint ၏အဆိုအရ iPhone 12 သည်ကမ္ဘာ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး 5G မိုဘိုင်းဖြစ်သည်
Counterpoint ၏အဆိုအရ iPhone 12 သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းရဆုံး 5G မိုဘိုင်းဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်၎င်းသည် 5G အရောင်းကုမ္ပဏီ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။
iPhone 12 Pro နှင့် iPhone 12 Pro Max တွင် ProRAW အမျိုးအစားကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
iPhone 12 Pro နှင့် iPhone 12 Pro Max တွင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနည်း။ ယခုသင် compressed လုပ်မထားသော format အသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Apple ကဇန်နဝါရီလတွင် iPhone ဝယ်လိုအားတိုးလာမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင် iPhone ရောင်းအားသည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မြင့်တက်မည်ဟု Apple ကခန့်မှန်းထားသည်။
iOS bug တစ်ခုက iPhone 12 ကို Qi အားသွင်းတာကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး
ထောင်နှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ iPhone 12 အား Qi အသိအမှတ်ပြုကြိုးမဲ့အခြေစိုက်စခန်းများဖြင့်အားသွင်းရန်ပြproblemsနာများကိုသတင်းပို့ကြသည်
ဘရာဇီးက Apple အား iPhone အားသွင်းစက်ဖြင့်ရောင်းချရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်
ဘရာဇီးနိုင်ငံ Sa Paulo မှအက်ပဲလ်အားအိုင်ဖုန်းအသစ်များကိုသေတ္တာထဲ၌ထည့်သွင်းထားသော iPhone အသစ်များကိုရောင်းချရန်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။
အချို့ iPhone များတွင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုပြproblemsနာများ ၁၂
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည် Apple ဖိုရမ်များတွင်၎င်းတို့၏ iPhone 12 တွင်အလွန်မြင့်မားပြီးမမျှော်လင့်သောဘက်ထရီသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းနေကြသည်
iPhone 12 ကိုရေအောက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်
iPhone 12 ကိုရေအောက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအနက်နှင့်မီတာ6အနက်မှာဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနစ်မြုပ်။
ဘက်ထရီ "L" နှင့် iPhone 12 Pro Max တွင် ပို၍ အံ့အားသင့်စရာများ
iFixit ရဲ့ပထမဆုံးဆန်းစစ်မှုက "12" Max Battery နဲ့ iPhone XNUMX Pro Max မှာအံ့အားသင့်စရာအနည်းငယ်တွေ့ခဲ့တယ်။
iPhone 12 အတွက် Apple ရဲ့သားရေအပြည့်အိတ်
အက်ပဲလ်ဟာအိုင်ဖုန်း ၁၂ အသစ်အတွက်ထည့်သွင်းထားတဲ့သားရေကိုယ်ထည်အသစ် (သို့) Leather Sleeve ကိုတရား ၀ င်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၄၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။
Halide ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးသူက iPhone 12 Pro Max ၏ကင်မရာကိုဆန်းစစ်သည်
Halide ဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးသူက iPhone 12 Pro Max ကင်မရာကိုဆန်းစစ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာအသစ်နှင့်သင်သဘောကျသွားသည်
iOS 14.2.1 ကို iPhone 12 အသစ်အတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
iPhone 14.2.1 တွင်တွေ့ရှိရသောပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Apple သည် iOS 12 သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည်
အချို့သော iPhone 12 မော်ဒယ်များတွင် Screen ပြproblemsနာများကို Apple ကအသိအမှတ်ပြုသည်
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone မော်ဒယ်လ်စတင်ခြင်းဖြင့်ပြnewနာအသစ်များပေါ်ပေါက်လာသည်။ ယခုနှစ်တွင်မျက်နှာပြproblemsနာများသည်ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးတွင်ပဲ့တင်ထပ်နေပါသည်။
DisplayMate အဆိုအရ iPhone 12 Pro Max တွင်အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်ရှိသည်
DisplayMate က iPhone 12 Pro Max မျက်နှာပြင်ကို ၆၀Hz Refresh နှုန်းရှိသော်လည်း "စမတ်ဖုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်" အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
iPhone 12 mini အတွင်းမှာဘာဖုံးကွယ်ထားသလဲ။ iFixit ကကျွန်တော်တို့ကိုပြတယ်
iFixit က Apple iPhone 12 mini အသစ်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ ၎င်းသည် iPhone 12 နှင့်တူညီသည်။ သို့သော်အနည်းငယ်သေးငယ်စေရန်အတွက်အပြောင်းအလဲအချို့ရှိသည်
Everyday Experiments ၏ "iPhone 12 ပေါ်က Shot" ဗီဒီယိုအသစ်။ အိမ်မှာဖန်တီးမှုကိုရယူပါ။
Apple က "Shot on iPhone" ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာသူကအိမ်မှာ iPhone 12 နဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအချို့နဲ့အိမ်မှာဘာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာပြသလိုက်ပါတယ်။
အချို့ iPhone 12 mini အသုံးပြုသူများသည်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိတွေ့မှုအမှားများကိုအစီရင်ခံကြသည်
အချို့ iPhone 12 mini အသုံးပြုသူများသည်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ထိတွေ့မှုအမှားများကိုအစီရင်ခံကြသည်။ သူတို့က၎င်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသာပုတ်ရမည်။
iPhone 12 Pro Max ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များသည်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
iPhone 12 Pro Max အသစ်ကို Apple စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးသမျှတွင်အကြီးဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။
DXOMARK သည် iPhone 12 ကိုကင်မရာအဆင့်တွင်စတုတ္ထနေရာတွင်ရှိသည်
DXOMARK လေ့လာသုံးသပ်သူများက iPhone 12 Pro ကို Huawei ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနှင့် Xiaomi တစ်ခုနောက်တွင်မိုဘိုင်းကင်မရာတွင်စတုတ္ထနေရာရရှိခဲ့သည်။
iPhone 12 Pro Max ၏ပထမပိုင်းသည် iPhone 11 Pro Max ထက်စွမ်းရည်နိမ့်သည့်ဘက်ထရီကိုအတည်ပြုသည်
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် iPhone 12 Pro Max ၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် iPhone 300 Pro Max ထက် 11 mAh ပိုမိုနိမ့်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်
iPhone 12 Pro Max နှင့် 12 mini သို့တင်ပို့မှုအပြောင်းအလဲ
Apple က iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini နှင့် HomePod mini အသစ်များကို၎င်းတို့ကိုကြိုတင်မှာယူသူများထံပေးပို့ခဲ့သည်
iPhone 12 mini ကိုစမ်းကြည့်တဲ့သူကသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးတယ်
iPhone 12 ကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့သူကသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးတယ်။ မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှအယ်ဒီတာခြောက် ဦး သည်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုရေတွက်သည်။
Apple တွင် MagSafe တံဆိပ်၏တရားဝင်သားရေအိတ်များပါဝင်သည်
Apple သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ Apple Store တွင်ရုပ်ပုံအသစ်များထည့်သွင်းထားပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတရား ၀ င်မှုကိစ္စများတွင် MagSafe အားသွင်းစက်မှထွက်ခွာနိုင်သည်။
iPhone 12 Pro က Samsung Note 20 Ultra ထက်ပိုမြန်သည်
iPhone 12 Pro က Samsung Note 20 Ultra ထက်ပိုမြန်သည်။ A14 Bionic သည် Snapdragon 865+ ထက်များစွာသာလွန်သည်။
iPhone 12 Studio: သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော iPhone 12 ကို Cases ဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲပါ
Apple က iPhone 12 Studio ကိုစတင်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သော iPhone 12 ဒီဇိုင်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပုံစံ၊
iPhone 12 Pro Max နှင့် iPhone mini ၏ပထမဆုံးဗီဒီယိုများရောက်ရှိလာသည်
ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုများသည် iPhone 12 Pro နှင့် 12 mini model များ၏ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ယနေ့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်
အက်ပဲလ်စတိုးပိတ်လိုက်တယ် ယနေ့တွင် iPhone 12 Pro Max, 12 mini နှင့် HomePod mini တို့၏ကြိုတင်မှာကြားမှုများထားရှိသည်
iPhone 12 အသစ်များနှင့် HomePod mini ထည့်ရန်အက်ပဲလ်သည်ကမ္ဘာအနှံ့အွန်လိုင်းဆိုင်များကိုပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်
ပြတ်လပ်မှုများကြောင့် Apple သည် iPad ၏အစိတ်အပိုင်းများကို iPhone 12 သို့လွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်
iPhone 12 Pro ကိုဝယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားခြင်းက Apple အား ၄ င်း၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုပြုပြင်ရန်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပြန်လည်ခွဲဝေစေခဲ့သည်။
Apple သည် MagSafe ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ထုတ်လုပ်သူများကလိုက်ဖက်တဲ့အိတ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရန် Apple က MagSafe စံဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
MagSafe charger ကို iPhone 12 Mini တွင် 12W ဖြင့်ကန့်သတ်ထားမည်
နောက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် MagSafe အားသွင်းစက်များသည် iPhone 12 မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားစွာအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။
iPhone5ဖြင့်သင်၏ 12GHz WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
iPhone 12 ဖြင့် WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း 5GHz ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုပြပေးနေပြီ
iPhone 12 Pro ကိုတစ်ပတ်အကြာတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ထားသော iPhone 12 Pro ကိုဤနေရာတွင်လေ့လာပါ။ ၎င်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
Mujjo သည် iPhone 12 အားလုံးအတွက်သားရေအိတ်များကိုဖွင့်သည်
Mujjo သည် iPhone 12 အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးအတွက်သားရေကိုယ်ထည်အသစ်များကိုမော်ဒယ်လ်နှစ်ခုဖြင့်အရောင်လေးမျိုးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့ရောင်းချမှုနှင့်အတူအရောင်လေးမျိုးကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
iPhone 12 ကို charging ပြောင်းပြီးအားသွင်းနိုင်ပါပြီ
iPhone 12 မှာနောက်ပြန်အားသွင်းနိုင်အောင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်ဖို့နဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းဖို့နည်းပညာအလုံအလောက်ပါပါတယ်
iPhone 12 mini ၏ဗီဒီယိုသည် YouTube တွင်ပေါ်လာပြီး၎င်းကိုချက်ချင်းဖျက်ပစ်သည်
iPhone 12 mini နှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်း၏စာရေးသူမှရုပ်သိမ်းလိုက်သည်
Clips သည် iPhone 12 ရောက်ရှိလာခြင်းကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် HDR ၌ဗီဒီယိုများမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
iPhone 12 သည် Cutter၊ ပိုမိုပေါ့ပါးခြင်းနှင့် bendgate စမ်းသပ်မှုများကိုခုခံသည်
လူသိများသော youtuber JerryRigEverything ၏စမ်းသပ်မှုများက iPhone 12 အသစ်သည်ခြစ်ရာများကိုမည်မျှအထိခံနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
Dolby Vision ၏အဓိကဇာတ်ကောင်မှာ iPhone 12 Pro ကိုကြေငြာခြင်းဖြစ်သည်
အက်ပဲရဲ့ကြေငြာချက်အသစ်က Dolby Vision မှာမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပြုတဲ့ iPhone 12 Pro ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အရေးကြီးတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။
Apple က Apple အားသွင်းစက်များအားဆက်လက်ဝယ်ယူရန်အကြံပြုသည်
Cupertino ကုမ္ပဏီသည် iPhone တွင် charger ကိုထပ်မံထည့်သွင်းတော့မည်မဟုတ်သော်လည်းပြavoidနာများရှောင်ရှားရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူရန်ဆက်လက်အကြံပြုခဲ့သည်
အသစ်သော iPhone 12 နှင့် 12 Pro မော်ဒယ်များအတွက်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုများသည် Ceramic Shield ၏ခုခံမှုကိုပြသသည်
MagSafe charger သည် iPhone 12 ကိစ္စများတွင်အမှတ်အသားပြုသည်
iPhone 12 ၏ MagSafe အမှုအသစ်များကို MagSafe အားသွင်းစက်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အမှတ်အသားတစ်ခုကျန်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဘက်ထရီစမ်းသပ်မှု - iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro နှင့် iPhone 11 နှင့် iPhone 11 Pro တို့ဖြစ်သည်
ပထမဆုံးဘက်ထရီစစ်ဆေးမှုက iPhone 11 Pro သည် iPhone 12 Pro ထက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပိုရှိပုံကိုပြသည်
ဗွီဒီယိုတစ်ခုအရ iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro တို့သည်တူညီသောဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ထားသည်
လူတွေဟာ iPhone 12 နဲ့ iPhone 12 Pro တို့မှာတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတာကိုလူအများပြောနေကြတာ ...
အက်ပဲလ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် iPhone 12 နှင့် 12 Pro အသစ်နှင့်အတူပြောင်းလဲသွားသည်
တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းစာမျက်နှာမှ iPhone 12 နှင့် 12 Pro သစ်ကိုပင်မမျက်နှာပြင်တွင်ဖော်ပြပေးထားသည်
ဒီစမ်းသပ်မှုကပြသထားတာက iPhone 12 ရဲ့မျက်နှာပြင်က iPhone 11 ထက်နည်းနေတယ်ဆိုတာပြနေတယ်
ဤစမ်းသပ်မှုအရ iPhone 12 မျက်နှာပြင်သည် scratch နှင့် pressure test များဖြစ်ခဲ့လျှင် 11 ထက် screen ကိုပိုမိုခံနိုင်သည်။
iPhone 12 Pro: ဒါဟာတကယ်ကိုထိုက်တန်ရဲ့လား? Unboxing နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးစှဲ
iPhone 12 Pro အသစ်၊ အံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ။
Podcast 12 × 05: iPhone 12 နှင့် iPad Air4၏ပထမဆုံးသုံးသပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်သည်
iPhone 12 နှင့် 12 Pro အသစ်များနှင့် iPad Air အသစ်များကိုပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်၊ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
iPhone 12 အသစ်အတွက် MagSafe အမှုအရာများစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီးအချို့သည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်
iPhone 12 သစ်ကို ၀ ယ်သူများသည် Magsafe အိတ်များကဲ့သို့အပိုပစ္စည်းများကိုစတင်လက်ခံရရှိပြီးအချို့မှာချွတ်ယွင်းနေသည်။
Software Updates တွေကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းအပါအဝင်အရာအားလုံးအတွက် 5G
Apple က iPhone 12 မော်ဒယ်သစ်များတွင် operating system ကို 5G connection မှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည်
iPhone ၏အတွင်းပိုင်းပုံရိပ်များ 12
iPhone ၏အတွင်းပိုင်း၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ ၁၂။ MagSafe အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုသင်တွေ့နိုင်မည့်ဗီဒီယို။
Tom လမ်းညွှန်သည် iPhone5တွင် 12G ဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့်ရလဒ်များကိုပြသပြီးသင်မကြိုက်ပါ
iPhone 12 နှင့် 12 Pro သစ်တို့၏ဘက်ထရီသည် 20G ဆက်သွယ်မှုထက် ၅G ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ ၂၀% ပိုမြန်သည်
Apple က CE အမှတ်အသားကို iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro တို့ဘက်တွင်ချထားသည်
iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro တို့၏ CE အမှတ်အသားသည်ညာဘက်တွင်လေဆာဖြင့်အက္ခရာတင်ထားသည်။ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ဒါက iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro တို့၏အရောင်များဖြစ်သည်
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဤကိရိယာများကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Pro တို့၏အရောင်သစ်များသည်လည်းအလားတူပင်။
နို ၀ င်ဘာလအတွက် iPhone 12 Pro တင်ပို့မှု
အချို့သော iPhone 12 Pro မော်ဒယ်များကိုတင်ပို့ရန်နှင့်တင်ပို့မည့်နေ့ရက်သည်နို ၀ င်ဘာပထမပတ်တွင်ကျော်လွန်သည်
Kuo က iPhone 12 Pro ဝယ်လိုအားသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်းဝန်ခံသည်
Kuo က iPhone 12 Pro ဝယ်လိုအားသည်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေသည်ဟုဝန်ခံသည်။ အစောပိုင်းအစီအစဉ်နံပါတ်များတွင် iPhone 12 Pro သည် iPhone 12 ထက်သာလွန်သည်။
iPhone 12 Pro ၏ပထမဆုံးစံနှုန်းများသည်အံ့မခန်းဖွယ်နံပါတ်များကိုပြသည်
iPhone 12 Pro ၏ပထမဆုံးစံနှုန်းများသည်အံ့မခန်းဖွယ်နံပါတ်များကိုပြသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးယူနစ်များရှိပြီးဖြစ်သောအခွင့်ထူးခံပုဂ္ဂိုလ်အချို့သည်၎င်းတို့၏ Geekbench ကိုချိတ်ဆွဲထားသည်။
iPhone 12 Pro ဟာသူတို့ရဲ့ RAM memory ကို 6GB အထိတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်
အဆင့်မြင့် iPhone 12 ဖြစ်သော Pro နှင့် Pro Max သည်6GB နှင့်4Mini ၏ 12 GB နှင့်ဆန့်ကျင်။ 12 GB RAM သယ်ဆောင်သွားမည်။
"အဝါရောင်အစဉ်အမြဲရှိနေသော iPhone" သည် iPhone 12 ဗီဒီယိုအသစ်ဖြစ်သည်
"အစဉ်အမြဲစွမ်းအားအရှိဆုံး iPhone" သည် iPhone 12 ၏ဗွီဒီယိုအသစ်ဖြစ်သည်။ A14 သည် Bionic ပရိုဆက်ဆာ၏ကျေးဇူးကြောင့်အလွန်တကယ့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။
iPhone 12/12 Mini vs iPhone 12 Pro / 12 Pro Max - Mega နှိုင်းယှဉ်မှု
သူတို့ဟာဆင်တူပုံရပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့ iPhone 12 မော်ဒယ်အားလုံးမှာသေးငယ်တဲ့ကွာခြားချက်တွေရှိပေမယ့်မင်းတို့သူတို့ကိုပြောပြမယ်။
ဝယ်လိုအားမြင့်မားသောကြောင့် iPhone 12 တင်ပို့မှုအသစ်များသည်နိုဝင်ဘာလအထိနှောင့်နှေးခဲ့သည်
iPhone 12 (သို့) 12 Pro အသစ်တစ်ခုကိုကြိုတင်မှာယူထားတာလား။ ပြေးသည်! မြင့်မားသောဝယ်လိုအားရှိပြီး၎င်းကိုလက်ခံရန်အချိန်ယူနိုင်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်သင်ရရှိမည်ကိုသိရှိပါ။
Apple က iPhone ကိုဝယ်ချင်သူတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သုညငွေကြေးထည့်ပေးတယ်
charger ကိုဖယ်ရှားသော်လည်း Apple သည် iPhone 12 ဖြင့်ဝင်ငွေနည်းသည်
iPhone 12 မှအမြတ်အစွန်းများသည်အသစ်အဆန်းများဖြစ်လင့်ကစားစျေးနှုန်းများတက်နေသဖြင့်ကျဆင်းသွားသည်
iPhone 12 ၏ MagSafe အသစ်သည်သံလိုက်တစ်ခုထက်ပိုသည်
MAgSafe စနစ်သစ်သည်ရိုးရှင်းသောသံလိုက်တစ်ခုထက်မကပေ။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်စမတ်ဖုန်းများအကြားဆက်သွယ်မှုအပြည့်အဝရှိသည်။
iPhone 12 အတွက် Magsafe ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာမှဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင်ရောက်ရှိမည်
ဤရွေ့ကား MagSafe အားသွင်းစက်၏တရားဝင်ရက်စွဲများနှင့် iPhone 12 အသစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်
Podcast 12 × 04: iPhone 12 တင်ဆက်မှုကိုသုံးသပ်ခြင်း
ဒီရက်သတ္တပတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာ Apple က iPhone 12, HomePod Mini, MagSafe ပွဲတော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါတယ်။
ဤရွေ့ကား iPhone 12 နှင့်သဟဇာတအသစ်နှင့်အသုံးဝင်သော MagSafe ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်
Apple က iPhone 12 အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၊ သူတို့နှင့်အတူ MagSafe ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - terminal နှင့် personalize အတွက်အိတ်များနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များ - သည်။
Belkin သည် iPhone 12 အတွက်ပစ္စည်းအသစ်များကို MagSafe ၏အားသာချက်ဖြင့်တင်ပြသည်
Belkin သည်အားသွင်းကြိုးများနှင့်ကားကိုင်ဆောင်ထားသူများနှင့်အတူ iPhone 12 ၏ MagSafe အသစ်၏အားသာချက်ကိုရယူရန်အဆိုပြုချက်ကိုတင်ပြသည်။
၎င်းသည်သင် iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Mini အကြောင်းသိထားသင့်သောအရာအားလုံးဖြစ်သည်
ဤတွင်သင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့် iPhone 12 နှင့် iPhone 12 Mini တို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များရှိသည်။ ယခုနှစ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။
iPhone 12 ၏“ တရားဝင်” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုသူ့အရင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်
iPhone 12 ၏“ တရားဝင်” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုသူ့အရင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ iPhone 12 Pro မှလွဲ၍ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် iPhone များနှင့်ဆင်တူသည်။
Apple က iPhone 12 မှာအားသွင်းတဲ့ adapter မပါဝင်ပါဘူး။ ၂၅ ယူရိုနဲ့ရောင်းပါတယ်
Apple သည် iPhone 12 ထုတ်လုပ်မှု၏ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့ကျစေပြီးအားသွင်း adapter ကိုသေတ္တာမှဖယ်ရှား။ သီးခြားရောင်းချခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချပေးသည်။
ဒီသတင်းဟာတရားဝင်ဖြစ်ပေမယ့် iPhone 12 Pro ရဲ့အကွာအဝေးကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်
တရား ၀ င်သတင်းများအနေဖြင့် iPhone 12 Pro အကွာအဝေးတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ယခင် iPhone 11 Pro နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်္ဂါရပ်အသစ်များစွာရှိသည်။
iPhone 12 Pro နှင့် Pro Max အသစ်များကတော့အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ
Apple က iPhone 12 Pro နှင့် Pro Max အသစ်ကိုပြသလိုက်ပြီး၊ သူ့ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်များပြားလှတဲ့ top-of-the-range terminal နှစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။
အိုင်ဖုန်း 12 ဟာတကယ့်လက်တွေ့ဘဝဖြစ်နေပြီ
အိုင်ဖုန်း 12 ဟာတကယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ iPhone 12 ကိုမိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။
Evan Blass သည် iPhone 12 ၏အရောင်သစ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
iPhone 12 mini အသစ်နှင့် iPhone 12 Pro မော်ဒယ်များ၏အရောင်များကိုစစ်ထုတ်ပြီးနာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်
Apple ကအွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များကိုခေတ္တပိတ်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့အား iPhone 12 အသစ်အတွက်တင်ဆက်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်ဟူသောလက္ခဏာဖြစ်သည်
Live 12 ကို Actualidad iPhone ဖြင့်တင်ပြခြင်း
iPhone 12 တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်ကိုလိုက်နာပြီး Actualidad iPhone နှင့် Soy de Mac အဖွဲ့နှင့်အတူ
iPhone 12 ၏အနိမ့်သည်သေးငယ်သည်
iCloud ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့အိုင်ကွန်တချို့ကိုအာရုံစိုက်မိရင်၊ iPhone 12 ဟာသေးငယ်တဲ့အနိူင်တခုရှိနိုင်တယ်။
၂၄ နာရီအတွင်း iPhone 12 နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလအသစ်များ
စနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းခုနစ်နာရီတွင်၊ Apple မှ virtual keynote အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသက်သေခံရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ မရှိရင်…
iPhone 12 မှာ 5G 700MHz သဟဇာတမရှိတာမို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
12MHz ကြိမ်နှုန်းမှာ 5G ကို iPhone 700 မထောက်ပံ့နိုင်ဘူး၊ ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ အဘယ်အကျိုးဆက်များရှိလိမ့်မည်နည်း။
iPhone 12 အသစ်၏စျေးနှုန်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ထားသည်
တရုတ်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုမှအသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်အင်္ဂါနေ့တွင်တွေ့ရမည့် iPhone 12 မော်ဒယ်လေးမျိုး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
iPhone 12, HomePod Mini နှင့် MagSafe ပြန်လာခြင်း၊ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အင်္ဂါနေ့ ၁၃ ရက်နေ့တွင်သိထားသည်
၁၃ ရက်မှာဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲ။ ဈေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမည့်ရက်များအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။
iPhone 12 ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည့် iPhone ပွဲစဉ်ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုပြပါမယ်
Apple က iPhone 12 ပွဲကိုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်။
iPhone 12 မော်ဒယ်သစ်များအတွက်တရားဝင်ရက်စွဲရှိသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင်ရက်ချိန်းယူမည်
တရုတ်ပြည်ရှိ Foxconn စက်ရုံများသည် iPhone 12 အတွက်အသုံးပြုနေကြသည်
Foxconn သည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုအမြင့်ဆုံးရရှိရန်နှင့် iPhone ၏ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်သူ၏သွားများကိုကြိုးတုပ်နေသည်။
iPhone 12 တွင်သိုလှောင်မှုနှစ်ဆနှင့်ထို့ထက်ပိုသော Prosser
Jon Prosser ၏ပြောကြားချက်အရ iPhone 12 အသစ်ကိုအောက်တိုဘာ ၅ ရက်တွင်စတိုးဆိုင်များသို့ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်
Labels သည် iPhone 12 mini နှင့်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါရှိသည်
နောက်ဆုံးတွင် iPhone 12 mini သည် iPhone အသစ်တစ်ခုအတွက် Apple ကရွေးချယ်သောနာမည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်
iPhone 12 အတွက် Braided Lightning ကေဘယ်လ်ပုံသည်နောက်တဖန်ပေါ်လာသည်
အခြားပုံရိပ်များမှာ Apple က iPhone 12 box ထဲသို့ထည့်နိုင်သည့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော Lightning cable အသစ်၏ပေါက်ကြားမှုဖြစ်သည်
L0vetodream သည် iPhone 12 mini၊ 12, 12 Pro နှင့် 12 Pro Max အကြောင်းပြောပြသည်
မကြာသေးမီကဗီဒီယိုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များသည် iPhone 12 ၏ဒီဇိုင်းကိုရှင်းလင်းစေသည်
ဖြစ်ရပ်များမှဗီဒီယိုများနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုများအရ iPhone 12 အသစ်သည် iPad Pro ၏စတိုင်လ်အနေဖြင့်ပြားချပ်ချပ် bezels ပါသောဒီဇိုင်းရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်ကျင်းပမည့်ပွဲသည် Apple Watch နှင့် iPad တို့အပေါ်အာရုံစိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း Gurman မှပြောကြားခဲ့သည်
အက်ပဲလ်၏နောက်ထပ်ပွဲသည်စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်ဖြစ်သည်။ Mark Gurman အပါအ ၀ င်လေ့လာသုံးသပ်သူများက Apple Watch နှင့် iPad အသစ်များကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
iPhone 12 ကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့ပြီး AirTag စတင်နေပြီဖြစ်သည်
iPhone 12 ကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့ပြီး AirTag သည်စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၆.၁ လက်မအရွယ် iPhone 12 ကိုမကြာမီထုတ်လုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
အစိတ်အပိုင်းရောင်းချသူအများအပြားက ၆.၁ လက်မအရွယ် iPhone 12 သည်ကျန်မတိုင်မီထွက်ပေါ်လာမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
အစိတ်အပိုင်းရောင်းချသူအများအပြားက ၆.၁ လက်မအရွယ် iPhone 12 သည်ကျန်မတိုင်မီထွက်ပေါ်လာမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ခြားနားချက်တစ်လရှိတယ်။
iPhone 12 ၏ 5G နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွင်းပိုင်းတိုးတက်မှု
iPhone 12 ၏ 5G နှင့် XNUMXG ကင်မရာများသည်နည်းပညာအသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သူတို့၏ circuit board များတွင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်သည်
Apple5iPhone Max အတွက် 12G mmWave ဆက်သွယ်မှုကိုကြိုတင်ယူထားနိုင်သည်
နောက်ဆုံးသတင်းများအရ Apple သည် iPhone 12 Pro Max ကို 5G mmWave နည်းပညာနှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်ထားနိုင်သည်ဟုဆိုပါသည်။
iPhone 12 Pro ၏ LiDAR ကိုဒီပေါက်ကြားမှုအတွက်အတည်ပြုခဲ့သည်
iPhone 12 Pro ၏နောက်ကျောရှိဖန်ခွက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့်၎င်းတွင်အနည်းဆုံး LiDAR အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုရှိမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
iPhone 12 သည်အပြာရင့်ရောင်အသစ်ဖြင့်ရောက်လာနိုင်သည်
iPhone 12 နောက်ဆုံးထုတ်အစီရင်ခံစာတွင်ညဘက်စိမ်းလန်းသောအရောင်များပျောက်ကွယ်သွားပြီးအပြာရောင်အသစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြုထားသည်။
iPhone 12, Apple Watch6နှင့် AirTags တို့ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ပြသပါမည်
စက်တင်ဘာလ၊ iPhone အသစ်နှင့် Apple Watch တို့ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဟုထုံးစံအရစတင်ခဲ့သည်။
12Hz ဖြင့် iPhone 120 Pro Max မျက်နှာပြင်၏ပထမ ဦး ဆုံးဓာတ်ပုံ
iPhone 12 Pro Max ၏ပုံရိပ်တစ်ခုပေါ်လာပြီးပိုကြီးသည့်မျက်နှာပြင်နှင့် 120Hz အတူတူပင်ကိုဖွင့်နိုင်သည်
iPhone 12 မှာ 120Hz screen ရှိနိုင်တယ်
iPhone 12 မျက်နှာပြင်ကဆက်လက်ပြီးပြောစရာများစွာကျန်နေဆဲဖြစ်ပြီးယခုအခါ 120Hz သည်ကောလာဟလများ၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။
အက်ပဲလ်ဟာ iPhone 12 ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချပြီးသူ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်
iPhone 12 တွင်ထုတ်လုပ်မှုစျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးမည့် 5G နည်းပညာပါဝင်သည်။ Apple ကစျေးသက်သာသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားသည်
အသစ် 12 အရောင်များနှင့်လျော့နည်းထစ်နှင့်အတူအိုင်ပက် XNUMX သဘောတရားများ
သဘောတရားများက iPhone 12 ကိုပြတ်သားတဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်တကယ့်မော်ဒယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာအရောင်တွေ၊
စက်တင်ဘာလတွင် Apple Watch၊ အောက်တိုဘာလတွင် iPhone 12 ။
Jon Prosser ကလာမယ့် iPhone 12, Apple Watch6နဲ့ iPad 2020 အသစ်တွေထွက်မယ့်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။
iPhone 12 မှန်ဘီလူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောင်းချသူရဲ့ပြproblemနာ
iPhone 12 ကင်မရာမှန်ဘီလူးနှင့်ပတ်သက်သောပြနာတစ်ခုသည်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်အတွက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်
iPhone 12 ၏ OLED မျက်နှာပြင်၏ပုံရိပ်တစ်ခုယိုစိမ့်နေသည်
iPhone 12 ရဲ့ OLED မျက်နှာပြင်မှာပုံရိပ်တွေယိုစိမ့်နေပါတယ်။
Apple က iPhone 12 ကိုပုံမှန်ထက်နောက်ကျလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
၂၀၂၀ ၏တတိယသုံးလပတ်အတွက် ၀ င်ငွေညီလာခံတွင် Apple က iPhone 2020 အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Jon Prosser က iPhone 12 ကိုနှောင့်နှေးမည်ဟုအတည်ပြုရန် Qualcomm ၏သတင်းကိုရယူသည်
မကြာသေးမီက Qualcomm နှင့် Jon Prosser တို့၏ထုတ်ပြန်ချက်များက iPhone 12 အသစ်ကို 5G ဖြင့်လွှတ်ပေးရန်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများရှိနေသည်
iPhone 14 ရဲ့ A12 ပရိုဆက်ဆာရဲ့ပုံရိပ်တွေပေါက်ကြားသွားပြီ
iPhone 14 ၏ A12 ပရိုဆက်ဆာ၏ပုံရိပ်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကဖန်သားပြင်နှင့်ယနေ့အိုင်ဖုန်း၏ပရိုဆက်ဆာ၏ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်
DigiTimes ၏အဆိုအရ iPhone 12 ကိုစက်တင်ဘာလတွင်တင်မည်ဖြစ်သည်
DigiTimes အလတ်စား၏အဆိုအရ iPhone 12 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုစက်တင်ဘာလတွင်ပြုလုပ်ရန်ရှိပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင်စျေးကွက်၌စတင်မိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။
ဖြစ်နိုင်သည့် ၅.၄ လက်မအရွယ် iPhone 12 မျက်နှာပြင်၏ဓာတ်ပုံများပေါ်လာသည်
ဖြစ်နိုင်သည့် ၅.၄ လက်မအရွယ် iPhone 12 မျက်နှာပြင်၏ဓာတ်ပုံများပေါ်လာသည်။ ရှေ့ကင်မရာနှင့်အာရုံခံကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ရန်ပုံမှန်ထုံးစံရှိသည်။
iPhone 12 ကေဘယ်ကြိုးများ၏ပိုမိုယိုစိမ့်သောပုံများ
အောက်ပါ iPhone မော်ဒယ်များ၏အားသွင်းကြိုးအသစ်များဖြစ်သင့်သည်အဘယ်အရာ၏အသစ်နှင့်ရှင်းလင်းသောဓာတ်ပုံများ။
iPhone 12 Pro ဘက်ထရီသည်ယခင်ကကောလဟာလများထက်ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိလိမ့်မည်
iPhone 12 Pro ၏ဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရ၎င်းသည်ကန ဦး မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားမည်ဟုဆိုကြသည်။
ယခုဟုတ်ပြီ၊ ယခုမဟုတ်ပါ။ iPhone 12 ၏နှောင့်နှေးမှုသို့မဟုတ်မဖြစ်ခြင်းကမီဒီယာကိုရူးသွပ်စေသည်
iPhone 12 ဟာကောလဟာလတော်တော်များများမှာပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုကတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာရောင်းဖို့အချိန်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး
အရာအားလုံးက iPhone 12 သည် iPhone 11 ထက်ဘက်ထရီလျော့နည်းလိမ့်မည်ဟုအားလုံးကဖော်ပြသည်
iPhone 12 ထုတ်ကုန်များအတွက်နောက်ဆုံးရရှိသောအသိအမှတ်ပြုချက်များအရအရာအားလုံးသည်လက်ရှိ iPhone 11 ထက်ဘက်ထရီစွမ်းရည်လျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြသည်။
နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများအရ iPhone 12 Pro ကို6GB RAM ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်
iPhone 12 range အသစ်၏ RAM နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးထွက်သတင်းများအရ Pro version ကို6GB RAM ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်ဟုထောက်ပြသည်။
အားသွင်းစရာမလိုဘဲ iPhone 12 ကိုယိုစိမ့်စေသောအချက်များ
ကောလာဟလများနှင့်ယိုစိမ့်မှုများ၏စီးဆင်းမှုဆက်လက်နှင့်သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီတူညီသော ဦး တည်ရာကို ဦး တည်ညွှန်ပြ: တစ် ...
Nikkei ၏အဆိုအရ iPhone 12 ထုတ်လုပ်မှုကို ၁ လမှ ၂ လကြာနှောင့်နှေးခဲ့သည်
အာရှမီဒီယာ Nikkei မှခန့်မှန်းချက်အရ Apple သည် iPhone 1 အသစ်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၁ လမှ ၂ လအကြာကြာမြင့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
iPhone 12 သည် 4K ဗီဒီယိုများကို 240fps နှုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်
iPhone 12 Pro သည် 4K ဗီဒီယိုကို 240fps နှုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်မဖြစ်၊ သို့မဟုတ်ဖမ်းယူမှုသည် 4K တွင် 120fps နှုန်းဖြင့်ရှိမရှိနှင့် iPhone သည်နောက်မှထပ်မံ interpolate ပြုလုပ်မည်ကိုမရှင်းလင်းပါ။
iPhone 12 mockup ရဲ့ဗီဒီယို
လေ့လာဆန်းစစ်သူတစ် ဦး ၏အဆိုအရ iPhone 12 သည်နားကြပ်များနှင့်အားသွင်းစရာမလိုဘဲလာလိမ့်မည်
နောက်မျိုးဆက်သစ် iPhone သည်စျေးကွက်တွင်အားသွင်းစရာမလိုဘဲ၊ လျှပ်စီးဆက်သွယ်မှုနှင့်နားကြပ်မပါဘဲထိတွေ့နိုင်သည်
ပထမဆုံး iPhone 12 mockups ပေါ်လာတယ်
iPhone 12 မော်ဒယ်သစ်များ၏ပြပွဲမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များသည်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ဖြန့်ကျက်ထားပြီး၎င်းတို့နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပိုမိုစတုရန်းဒီဇိုင်းကိုပြသထားသည်
iPhone 12 အသစ်မှာတူညီတဲ့ notch size ရှိနိုင်ပါတယ်။ LIDAR sensor ကို ၆.၇ လက်မမော်ဒယ်လ်ကန့်သတ်ထားပါတယ်
လာမည့် iPhone 12 သည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကောလာဟလများပြန်ကြားလာသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် MAX အတွက် LIDAR နှင့် LIDAR တို့အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 12 ယိုစိမ့်မှုတွင် CAD မှိုနှင့်ပြန်ဆိုမှုများပါဝင်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone 12 နှင့်ပတ်သက်သောယိုစိမ့်မှုသည် iPad Pro နှင့်ဆင်တူသည့်လများ၌ငါတို့ပြောခဲ့သည့်ဒီဇိုင်းကိုသာအတည်ပြုသည်
Display ထုတ်လုပ်သူ BOE သည် iPhone 12 အတွက် OLED panel များအားပထမဆုံးပေးပို့ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့သည်
Display maker BOE သည် iPhone အတွက်ပထမဆုံး OLED panel များတင်ပို့ရန်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သည်။ ကံကောင်းချင်တော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရနိုင်သည်။
iPhone 12 ကို EEC database တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည်
iPhone 12 အသစ်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် Apple iMac အသစ်များကို Eurasian Economic Commission တွင် EEC အတိုကောက်အားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည်
iPhone 12 ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ရောင်းချနိုင်သော်လည်းယူနစ်အနည်းငယ်သာရှိသည်
DigiTimes က iPhone 12s သစ်ကိုယခုနှစ်အတွင်းတွင်ရောင်းချရန်နှောင့်နှေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏စတိုးဆိုင်အားလုံးတွင်ကုန်ပစ္စည်းမရှိတော့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်လတွင် Apple သည် iPhone 5G ကိုစတင်ထုတ်လုပ်တော့မည်
Digitimes ၏အဆိုအရ 2020G ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော iPhone5အသစ်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည်ဇူလိုင်လအထိစတင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Broadcom က iPhone 12 ကိုနှောင့်နှေးစေမည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်
Broadcom သည် iPhone ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်နှောင့်နှေးနေသည်ဟုအရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်။ ၎င်းသည်ရှယ်ယာရှယ်ယာရှင်များအားပုံမှန်တတိယသုံးလပတ်ငွေတောင်းခံမှုနှောင့်နှေးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
၆.၁ လက်မအရွယ် iPhone 12 ကိုဇူလိုင်လတွင်ထုတ်လုပ်မည်
DigiTimes မှထုတ်ပြန်သောသတင်းများအရလာမည့်လတွင် ၆.၁ လက်မအရွယ် iPhone 12 ထုတ်လုပ်မှုကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
Samsung က iPhone 80 ရဲ့ဖန်သားပြင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်လိမ့်မယ်
နောက်ထပ်တစ်နှစ် Samsung အနေဖြင့်ယခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဖြန့်ချိမည့် iPhone 80 range အသစ်၏ OLED ဖန်သားပြင်များ၏ ၈၀% ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်။
LG, Sharp နှင့် O-film တို့က iPhone 12 အတွက်ကင်မရာပံ့ပိုးသူများဖြစ်သည်
iPhone 12 အတွက်ကင်မရာ module တွေထောက်ပံ့ဖို့ Apple, LG, Sharp နဲ့ O-film ကိုအားကိုးနေတယ်
Apple က iPhone box ထဲမှာနားကြပ်တွေထည့်မပေးတော့ဘူး
လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏နောက်ဆုံးအချက်အလက်များအရ Appel သည် iPhone 12 box နှင့်အနာဂတ်ဗားရှင်းများတွင် EarPods ထည့်သွင်းခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
iPhone 12 ရဲ့ Motherboard ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့လက်ရှိဒီဇိုင်းနဲ့မတူပါဘူး
iPhone 12 ၏ပန်းကန်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာဝတ္ထုကိုစစ်ထုတ်ထားပြီး၎င်းတွင်လက်ရှိပန်းကန်နှင့် ပတ်သက်၍ ခြားနားချက်အချို့ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်
လာမည့် iPhone 12 နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
လာမည့် iPhone 12 နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ မတူညီသော iPhone 12 မော်ဒယ်လေးခု၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များ။
iPhone 12: 128GB သိုလှောင်မှုနှင့် 6GB RAM
iPhone 12 Pro ၏သိုလှောင်မှုနှင့် RAM အကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မော်ဒယ်အားလုံးအတွက် 128GB မှ စတင်၍ "Pro" မော်ဒယ်များတွင် 6GB RAM အထိရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်၏ 120Hz မျက်နှာပြင်၊ 3x zoom နှင့်တိုးတက်မှုသည် iPhone 12 ၏အသစ်အဆန်းအချို့ဖြစ်သည်
iPhone 12 မှာပြိုင်ဆိုင်မှုနှစ်နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပြီးပြီးတဲ့နောက်အက်ပဲဟာအကောင်အထည်ဖော်ဖို့နှေးကွေးနေတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်
အခြေခံစျေးနှုန်းဒေါ်လာ ၆၄၉ နဲ့ OLED အိုင်ဖုန်းအကြောင်းကောလဟလတစ်ခုထွက်လာတယ်
Front Page Tech မှရုပ်သံလိုင်း youtuber Jon Prosser ၏အဆိုအရ iPhone 12 မော်ဒယ်သစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်များစွာကုန်ကျနိုင်သည်ဟုဆိုသည်
iPhone 12 Pro ကိုဒီပုံမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်များသည်လာမည့် iPhone 12 Pro ၏ပုံပန်းသဏ္andာန်အားယုံကြည်စိတ်ချရသောပုံရိပ်များကိုဖန်တီးနိုင်စေပြီးအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောပုံဖြစ်သည်
iPhone 12 မှာသေးငယ်တဲ့ Notch ဒီဇိုင်းနဲ့ iPad Pro နဲ့ဆင်တူပါတယ်
အနာဂတ် Apple လွှတ်တင်မှုအသစ်များအတွက်ယိုစိမ့်မှုအသစ်များ၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်နောက်ထပ် ၁၂ ထပ်ရှိမည့် iPhone 12 အကြောင်းပြောရန်လိုအပ်သည်။
Kuo - ၆.၇ လက်မ iPhone 12 - image stabilizer အသစ်
Kuo: iPhone 12 သည်မှန်ဘီလူးအားလုံးအတွက်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုအသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်။ ၆.၇ လက်မမော်ဒယ်တွင်သာရနိုင်သည်
Coronavirus ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် 5G ပါ ၀ င်သည့် iPhone သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိရောက်ရှိမည်မဟုတ်
လေ့လာသုံးသပ်သူများ၏အဆိုအရ 5G ကွန်ယက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအိုင်ဖုန်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိနှောင့်နှေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်
iOS 14 ကုဒ်က iPhone 12 Pro သာ 3D ToF အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်ကိုညွှန်ပြသည်
iOS 14 ကုဒ်က iPhone 12 Pro သာ 3D ToF အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်ကိုညွှန်ပြသည်။ ဒီအာရုံခံကိရိယာကို TrueDepth ရှေ့ကင်မရာကထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
iPhone 12 ရဲ့အယူအဆအသစ်ကကျောဘက်မှာမှန်ဘီလူး ၆ ခု၊ holograms နဲ့ iPhone ရဲ့ဘေးဘက်မှာမျက်နှာပြင်တပ်ထားတယ်။
iPhone 12 ၏ကောလာဟလများမှာအခြားသတင်းများ၌ဘက်ထရီနှင့် 64MP ကင်မရာများပိုမိုထည့်သွင်းပေးသည်
လာမယ့် iPhone မော်ဒယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောလာဟလတွေကကင်မရာအာရုံခံကိရိယာတိုးတက်မှု၊ မော်ဒယ်အားလုံးအတွက်အနီရောင်အရောင်နဲ့အခြားတိုးတက်မှုတွေကိုညွှန်ပြနေတယ်
အချို့သောလေ့လာသုံးသပ်သူများကလာမည့် iPhone 12 သည်အလွန်များပြားသောရောင်းအားအကြောင်းပြောကြသည်
အချို့သောလေ့လာသုံးသပ်သူများကလာမည့် iPhone 12 သည် device update cycles ကြောင့်ကြီးမားသောရောင်းအားပမာဏရှိလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုနေကြသည်။
iPhone 12 စတင်ခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းများသည် coronavirus ကြောင့်နှောင့်နှေးခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်
Coronavirus သည် iPhone 12 ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Apple ၏ iPhone 2020 အသစ်ကိုကြေငြာခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
Podcast 11 × 24: Google Rate, iPhone 12 နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်
Qualcomm မှ iPhone5အတွက် 12G modem အသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။
San Diego မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ iPhone5ပါ ၀ င်တဲ့ modem တစ်ခုမှာ Qualcomm ကသူ့ရဲ့ 12G modem အသစ်ကိုကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အလွန်တိုတောင်းသော WiFi နှင့် AirTags ပါသည့် iPhone 12 ။ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း
ကောလာဟလအသစ်များအရ AirTags များအတွက်လာမည့် iPohne 12 နှင့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်သည့် WiFi အသစ်အကြောင်းပြောပြသည်
Coronavirus က iPhone 12 ထုတ်လုပ်မှုကို iPhone9ထက်ပိုပြီးနှောင့်နှေးစေနိုင်တယ်
Coronavirus သည် iPhone 12 ထုတ်လုပ်မှုကို iPhone ၏ထုတ်လုပ်မှုထက် ပို၍ နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသည့် iPhone 12 ၏ Concept video
Jermaine Smit ကသူ၏ YouTube channel တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော iPhone 12 Pro ၏ render / concept အသစ်၏ဗီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။
iPhone 12 သည်ညဘက်အစိမ်းကိုကြော့ရှင်းသောအပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်
iPhone 12 သည်ညဘက်အစိမ်းကိုကြော့ရှင်းသောအပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကောလာဟလတစ်ခုကအနာဂတ်အိုင်ဖုန်း Pro ကိုအစိမ်းရောင်မှအပြာရောင်ပြောင်းရန်ညွှန်ပြနေသည်။
JPMorgan ၏အဆိုအရ Apple သည် iPhone 12 မော်ဒယ်လေးမျိုးအထိထုတ်လုပ်နိုင်သည်
JPMorgan ကပြောကြားသည်မှာ Apple အကိုက်ခံထားရသောကုမ္ပဏီသည်လာမည့်နှစ်တွင် iPhone မော်ဒယ်လ် ၄ ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်နေသည်။
Apple က iPhone 100 ကိုသန်း ၁၀၀ ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်
လူအများအပြားက Apple သည် 5G နည်းပညာဖြင့်ပထမဆုံး iPhone ကိုဖြန့်ချိမည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသည်။